Millimeter Hydraulic Butt Fusion Machines Vagadziri, Vatengesi - China Millimeter Hydraulic Butt Fusion Machines Fekitori
Isu tinobatsira nyika ichikura kubvira 1983
Tsigiro yeemail sales@sudabuttfusion.com
Fonera Tsigiro 0086-18253285200
Garo Fusion Machines
Millimeter Hydraulic Garo Fusion Machines
ASTM Inch Hydraulic Garo Fusion Machines
Yakakwira-Inomanikidza Hydraulic Butt Fusion Machines
In-Rakadzika Hydraulic Butt Fusion Machines
Manual garo Fusion Machines
Chigaro Fusion Machine
Pipe Kucheka Vakaona
Multi Angle Bhendi Yakaona
Chigaro Radius Band Vakaona
Inverter electrofusion muchina
Shanduri electrofusion muchina
Otomatiki Plastiki Sheet
Socket PPR Welding Muchina
SUD800H garo Fusion Machine
SUD630H garo Fusion Machine
12 ~ 24 padiki garo fusion muchina
SUD500H garo Fusion Machine
Kunyorera uye Feature SUD500H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Inokodzera kutungidza pombi yepurasitiki uye zvigadzirwa zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye dhiri ...
SUD1200H Garo Fusion Machine
Kunyorera uye Feature SUD1200H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kudziya ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
SUD1000H Garo Fusion Machine
Kunyorera uye Feature SUD1000H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa zvimisikidzo. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kudziya ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Gadzirwa neyakareruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Kunyorera uye Feature SUD800H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kudziya ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Gadzirwa neyakareruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Kunyorera uye Feature SUD630H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kudziya ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
SUD450H Garo Fusion Machine
Kunyorera uye Feature SUD450H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kudziya ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye dhiri ...
SUD400H garo Fusion Machine
Kunyorera uye Feature SUD400H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa zvimisikidzo. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kudziya ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Gadzirwa neyakareruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
SUD250H Garo Fusion Machine
Kunyorera uye Feature SUD250H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
SUD315H Garo Fusion Machine
Kushanda uye Feature SUD315H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Gadzirwa neyakareruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
SUD355H Garo Fusion Machine
Kunyorera uye Feature SUD355H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kudziya ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Gadzirwa neyakareruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
SUD200H garo Fusion Machine
Kunyorera uye Feature SUD200H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kudziya ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Gadzirwa neyakareruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye dhiri ...
SUD160H Garo Fusion Machine
Kunyorera uye Feature SUD160H ndeye hydraulic butt fusion michina. Iyo inoshandiswa kugadzika weld pombi uye zvigadzirwa senge kugokora, tee, muchinjikwa, wye uye flange mitsipa pasina chero chinowedzerwa michina nekungogadzirisa inosungisa. Iyo inokodzera kutema pombi yepurasitiki nenyere zvakagadzirwa neHDPE, PP, PVDF zvinhu. Inobvisika PTFE yakaputirwa kupisa ndiro neparutivi tembiricha yekudzora system. Chishandiso chekugadzira magetsi. Ita zvekureruka uye yakasimba simba zvinhu; chimiro chakareruka, chidiki uye ...
Suda Plastic Pipe Machinery Ratidza pa 2019 ...
54inch ASTM Yakadzika In-Ditch Yakagadzika Garo ...
China guru welded mutopota diamete ...